Global Voices teny Malagasy » Mpanao gazety an-dahatsary indizeny sady mpikatroka novonoina tany India · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Janoary 2019 4:41 GMT 1	 · Mpanoratra VideoVolunteers Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsimo, India, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Pikantsary avy amin'ny Lahatsary YouTube
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i Nupur Sonar  ary niseho voalohany tao amin'ny Video Volunteers, fikambanan'ny fampitam-baovaon'ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena any India nahazo loka.
Vao maraina tamin'ny 9 Desambra 2018, hita nisy namono  tao amin'ny faritra Ghaghra any Jharkhand , India ny Mpitati-baovaon'ny Vondrom-piarahamonina Video Volunteer, Amit Topno. Efa tao amin'ny Video Volunteers (VV) nanomboka tamin'ny taona 2012 i Topno, Adivasi  (vazimba teratany) iray monina any amin'ny faritra anaty ady any Khunti , Jharkhand, ary nitatitra ho an'ny Newscode sy OK Times, ary vao haingana izy no namily taksi tao amin'ny Ola Cab.
Notaterin'i Topno tsy nisy tahotra ny momba ireo olana toy ny fitrandrahana fasika, fivarotana zava-pisotro misy alikaola tsy ara-dalàna, ny zon'ny Adivasi, ny fanabeazana, ny fahadiovana, ny fanondranana olona, ​​ny zon'ny fananan-tany, ny kolontsaina ary vao haingana indrindra ny hetsika Pathalgadi. Ny tatitra farany nataony ho an'ny VV dia novokarina enim-bolana lasa momba ny Pathalgadi , hetsika iray izay nanamafisan'ireo vondrom-piarahamonina Adivasi manerana an'i Jharkhand sy Chhattisgarh ny zon'izy ireo hizaka tena. Mifototra amin'ny fanentanana sy amin'ny fiantohana ny fampiharana ireo fepetra manan-danja ao amin'ny Lalàna Panchayats (Fikasana Fanitarana Faritra), tamin'ny taona 1996 ny hetsika izay mamaritra ny tanànakely ho fiadidiam-paritra.
Ankoatra ny maha-mpanao gazety azy ao amin'ny vondrom-piarahamonina dia mpikatroka ara-tsosialy ihany koa i Topno. Narahany asa teny an-toerana ny tatitra an-dahatsary izay nataony mba hamahana ny olana izay notateriny. Nandefa lahatsary ho an'ny vondrom-piarahamonina izy, nanatontosa fivorian'ny tananakely, nanampy ny vondrom-piarahamonina tamin'ny fomba fanoratana ny fangatahana sy ny fihaonana tamin'ny manampahefana ao amin'ny governemanta ary niasa tamin'ny fiantohana ny fanatontosana andraikitra. Nahatonga ny sekoly ho azo antoka izany ary nandrisika ny mpitondra mba hiatrika ireo olana toy ny fifandonan'ny olombelona sy ny biby ao amin'ilay faritra. Tsaroan'ireo izay nahafantatra azy ho toy ny tia karokaroka, mafana fo, be fitiavana mahafinaritra ary tena manampy sy be herimpo izy. Tao anatin'ny antsafa iray tamin'ny taona 2015, hoy i Topno:
Tany iray nalaina tao anaty tadio mahatsiravina i Jharkhand. Mihodikodina ao anatin'ny hanoanana, ny ady, ary ny fahantrana ny vahoakany. Izaho no lehiben'ny tanànako, Nichitpur, Jharkhand, ary leo aho mahita ny vahoakako maty, “hoy i Amit tao anatin'ny antsafa tamin'ny taona 2014.
Hita tao amin'ny lalana Namkum-Doranda tao Ranchi  tamin'ny 9 Desambra ny vatana mangatsiaka an'i Topno. Nanambara ny tatitry ny fandidiam-paty fa notifirina indroa izy ary mbola tafajanona tao anaty vatany ny iray tamin'ireo bala . Nanambara ihany koa ny tatitry ny fandidiampaty fa tsy nisy marika fifandonana na tolona, eny fa na dia marika ratra aza. Tsy hita ny taksy nentiny, ny findainy ary ny karatra-panondrony kanefa tsy very ny volany. Tsy nisy fitaovam-piadiana hita teo amin'ny toerana nitrangan'ny heloka bevava. Izany rehetra izany dia milaza ny famonoan'olona efa nomanin'ny matihanina. Efa 11 andro mahery izay no lasa hatramin'ny famonoana azy ary tsy nisy fisamborana na dia nilaza aza ny polisy fa misy ireo ahiahiana.
Ny 14 desambra, olona maherin'ny 100, anisan'izany ireo mpitarika ny hetsika ara-tsosialy, mpikatroka, mpanao gazety, mpianatra ary mpikambana ao amin'ny tambajotran'ny VV no nandray anjara tamin'ny diabe milamina mba hanohitra ny famonoana azy. Tao amin'ity diabe ity dia niresaka momba ny fandrahonana matetika sy ny fanorisorenana atao amin'ireo mpikatroka sy ireo mpanao gazety ao Jharkhand i Jerrome Kujur, Dayamani Barla, Deepak Bara. Nandrisika ny fanjakana izy ireo mba hanao fanadihadiana lalina momba ity tranga ity ary hitondra izay namono an'i Amit Topno ho amin'ny fitsarana.
Ny 15 Desambra 2018, nihaona tamin'ny lehiben'ny polisy ny solontenan'ny fikambanana fiarahamonim-pirenena sivily, anisan'izany VV ary nandrisika azy hanao fanadihadiana lalina sy haingana amin'ny famonoana an'i Topno. Nanome toky ny SSP fa atao ny fanadihadiana rehetra izay azo atao.
Ny 17 Desambra 2018, nikarakara hetsi-panoherana am-pilaminana tao Jamshedpur  ny Jharkhand Jantantrik Mahasabha. Nametraka fangatahana tao amin'ny Vaomieran'ny Vondrom-poko Nasionaly ihany koa ny namana sy ny mpiara-dia amin'i Amit izay nanentana azy ireo hijery ity vonoan'olona mahatsiravina ity. Ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena dia nametraka ity raharaha ity tamin'ny Lehiben'ny Sekreteran'ny Governemanta ao Jharkhand sy ireo minisitra hafa tamin'ny 19 desambra 2018. Arup Chatterjee, solombavam-bahoaka avy any Nirsa Dhanbad, no nomena ny antontan-taratasy mifandraika amin'ny asan'i Topno ary nampanantena izy fa hilaza ilay olana amin'ny fivoriana amin'ny fivoriana ririnin'ny antenimiera izay nanomboka tamin'ny 24 Desambra.
Na dia tsy nampahafantatra tamin'ny mpiara-miasa aminy mihitsy aza i Topno momba ireo fandrahonana azy nandritra ireo 18 volana farany teo, dia tsy azo lavina fa novonoina izy noho ny asany amin'ny maha mpanao gazety sady mpikatroka ara-tsosialy azy, izay nanasongadina ny olana miantraika amin'ny vondrom-piarahamonina amin'ny fanilikilihana sy miasa any amin'ny faritra anjakan'ny ady tany. Tamin'ny volana Novambra 2018, nisy mpanao gazety iray hafa avy amin'io faritra io ihany koa no novonoina. Mampahatsiahy ny famonoana an'i Topno fa mandry tsy lavo loha ny mpanao gazety milaza ny marina amin'ny fitondrana sy manao tatitra avy any amin'ny faritra lavitra sy ambanivohitra raha eo amin'ny laharana faha-14 i India eo amin'ny Tondro Manerantany amin'ny fisian'ny Tsimatimanota .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/03/132262/
 hita nisy namono: https://www.groundxero.in/2018/12/11/adivasi-journalist-covering-pathalgadi-movement-went-missing-now-found-dead/